Gufgaf|Online दीपाश्री र निरुता सिंह देउरानी जेठानी !
दीपाश्री र निरुता सिंह देउरानी जेठानी !
गफगाफ - पछिल्लो समय दर्शकले अत्यधिक रुचाएको हाँस्यव्यङग्य कार्यक्रम मुन्द्रेको कमेडी क्बलमा यो साता चर्चित र लोकप्रिय जोडी अभिनेता दिलिप रायमाझी र अभिनेत्री निरुता सिंहले उपस्थिती जनाएका छन् । आफ्नो मन पर्ने कार्यक्रममा दिलिप र निरुतालाई एकसाथ देख्न पाउँदा दर्शकले पनि खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित यी दुईले आफ्नो उपस्थितीमार्फत दर्शकलाई मनोरन्जन दिने भरपुर कोशिष गरेका छन् । यसका अलावा उनीहरु कार्यक्रमका कलाकारहरुले दिएको प्रस्तुतीमा पनि निकै रमाएको देख्न सकिन्छ । कार्यक्रममा ठट्टै ठट्टामा अविवाहित निरुताको विवाहको कुरा पनि आईरहन्छ । कार्यक्रमका पात्र लट्टे अर्थात राजेन्द्र नेपालीले आफ्नो प्रस्तुतीमा निरुतालाई मन पराएको र उनीसँग विवाह गर्ने चाहना भएको कुरा व्यक्त गरिरहन्छन् । निरुताले यो कुरालाई सहज रुपमा लिएर लट्टेको प्रस्तुतीमा रमाईरहेकी छिन् ।
कार्यक्रममा पटक पटक विहेको कुरा आएपछि निरुताले कार्यक्रमकी अध्यक्ष दीपाश्री निरौलालाई देखाउँदै भन्छिन्, ‘हामीलाई एउटै घरको दाजु भाई खोजिदिनु पर्यो । हामी जेठानी देउरानी भएर बस्छौँ । ’ निरुताले यति भनेपछि उपस्थित दर्शकहरु दिर्घामा हाँसो फैलिएको देख्न सकिन्छ ।
लामो समयको अन्तरपछि नेपाली सिनेमामा फर्केकी निरुताको मुख्य भूमिका रहेको सिनेमा दाल भात तरकारी बैशाख २० गतदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ । सिनेमाको काम सकेर मुम्बई फर्केकी निरुता यतिबेला भने आराम गरिरहेकी छिन् । मुम्बई पुगेर उपचार गराउँदा उनलाई डेंगु लागेको थाहा पाएपछि निरुता अहिले पूर्णरुपमा आराम गरिरहेकी छिन् । उनले अझै केही समय आराम गर्नु पर्नेछ । उनी सन्चो भएको खण्डमा सिनेमाको प्रचारको लागि नेपाल आउने छिन् ।्